प्रदेश १ मा ८० प्रतिशत रोपाइँ - Mero Mechinagar
भित्र कृषि, प्रदेश-१
Farmers plant rice on their land in the terai area of Nepal’s Bardiye district,alowland region where most farmers are known grow rice. The farmers plant their crops during the monsoon season, which is between June through August. (Yam Kumari Kandel, GPJ Nepal)
५ साउन,मेचीनगर । साउनको पहिलो हप्तासम्म एक नम्वर प्रदेशमा ८० प्रतिशत धान रोपाइँ भएकोे भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए। उप्रेतीका अनुसार साउन ४ गते सम्म कुल क्षेत्रफलको ८० प्रतिशत रोपाई भएको छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लामा ८ हजार ८ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा ८५ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । सङ्खुवासभामा १४ हजार २ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने भएपनि ७० प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा १५ हजार हेक्टरमा धानखेती हुने भएपनि ९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
पाँचथर जिल्लामा ११ हजा ५ सय हेक्टरमा धानखेती हुँदै अएकोमा श्रावणको पहिलो हप्तासम्म ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । इलाममा १५ हजार ९ सय ९५ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेकोमा ६५ प्रतिशत रोपाई भएको छ भने २० हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिने भोजपुरमा ८५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ ।
तेह्रथुम जिल्लामा १० हजार १ सय ७५ हेक्टरमा धान खेती गरिदै आएकोमा १० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भइसकेको छ । ११ हजार दूई सय चार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने धनकुटा जिल्लामा ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । उदयपुर जिल्लमा १४ हजा ७ सय पचास हेक्टक्षेत्रफलमा धानखेती हुने भएपनि ६५ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । ओखलढुङ्गा जिल्लामा छ हजार छ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
खोटाङ जिल्लमा १५ हजार २ सय दूई हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने भएपनि ७५ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । झापा जिल्लामा ७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने भएपनि ४० प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । मोरङग जिल्लामा ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएकोमा ८० प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
गत वर्ष साउनको पहिलो हप्ता सम्म प्रदेश १ मा ८२ प्रतिशत स्थानमा रोपाइँ भएको भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।
यता सुनसरी जिल्लामा पनि अधिकतर स्थानमा धान रोपाइँ भएको सुनसरी ज्ञानकेन्द्रका प्रमूख नुनुलाल उराँउले बताए । उराँउका अनुसार सुनसरीमा ५३ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुदै आएकोमा यस वर्ष समयमै पानी परेकाले ८० प्रतिशत स्थानमा रोपाइँ भएको छ ।
तराईलाई अन्न भन्डारको राजधानी मानिन्छ । यस वर्ष समयमै धान रोप्न पाउँदा धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने किसानहरु बताउँछन् ।